I-Anchor Drill Rig Factory | I-China Anchor Drill Rig Abavelisi, abaXhasi
I-QDG-2B-1 i-Anchor yokomba iRig
Umatshini wokumba i-anchor sisixhobo sokomba kwinkxaso ye-bolt yendlela yam yamalahle. Inezinzuzo ezibalaseleyo ekuphuculeni isiphumo senkxaso, ukunciphisa iindleko zenkxaso, ukukhawulezisa isantya sokwakhiwa kwendlela, ukunciphisa inani lezothutho oluncedisayo, ukunciphisa amandla abasebenzi, kunye nokuphucula ukusetyenziswa kwenqanaba lendlela.
QDGL-2B Anchor yokomba Rig
Isixhobo esipheleleyo sokugrumba iankile ye-hydraulic sisetyenziswa ikakhulu kwinkxaso yomngxuma wesiseko sedolophu kunye nolawulo lokwakha ukufuduswa kwabantu, unyango lweentlekele zomhlaba nolunye ulwakhiwo lobunjineli. Ubume isixhobo wokugrumba kubalulekile, baxhotyiswa isisu semoto kunye nokubotshwa.
Sebenzisa ulwakhiwo lwedolophu, ezemigodi kunye nenjongo ezininzi, kubandakanya ne-slope esecaleni yenkxaso yesiseko esinzulu, umgaqo kaloliwe, uloliwe, idama kunye nokwakhiwa kwedama. Ukudibanisa itonela yangaphantsi komhlaba, ukulahla, ukwakha uphahla lombhobho, kunye nolwakhiwo loxinzelelo lwangaphambi koxinzelelo kwibhulorho enkulu. Buyisela isiseko sokwakha kwakudala. Sebenzela umgodi wam wokuqhuma.
Uthotho lwe-SM Anchor Drill Rig lusebenza kulwakhiwo lwe-bolt yamatye, intambo ye-anchor, ukubola kwe-geological, ukuqiniswa kokuqiniswa kunye nokufumba okuphantsi komhlaba kwiindidi ezahlukeneyo zeemeko zomhlaba ezinje ngomhlaba, udongwe, igrabile, umhlaba werwala kunye nomtya ophethe amanzi;